မွနျမာ – တရုတျ နှဈနိုငျငံ တှဆေုံ့ဆှေးနှေးပှဲကငျြးပ နိုငျငံတျော၏ အတိုငျပငျခံပုဂ်ဂိုလျ ဒျေါအောငျဆနျးစုကွညျနှငျ့ တရုတျပွညျသူ့သမ်မတနိုငျငံ သမ်မတ မစ်စတာ ရှီကငျြ့ဖငျြတို့ တကျရောကျဆှေးနှေး | NLD
Home State Counsellor မွနျမာ – တရုတျ နှဈနိုငျငံ တှဆေုံ့ဆှေးနှေးပှဲကငျြးပ နိုငျငံတျော၏ အတိုငျပငျခံပုဂ်ဂိုလျ ဒျေါအောငျဆနျးစုကွညျနှငျ့ တရုတျပွညျသူ့သမ်မတနိုငျငံ သမ်မတ မစ်စတာ ရှီကငျြ့ဖငျြတို့ တကျရောကျဆှေးနှေး
မွနျမာ – တရုတျ နှဈနိုငျငံ တှဆေုံ့ဆှေးနှေးပှဲကငျြးပ နိုငျငံတျော၏ အတိုငျပငျခံပုဂ်ဂိုလျ ဒျေါအောငျဆနျးစုကွညျနှငျ့ တရုတျပွညျသူ့သမ်မတနိုငျငံ သမ်မတ မစ်စတာ ရှီကငျြ့ဖငျြတို့ တကျရောကျဆှေးနှေး
Posted By: mygate wayon: ဇနျနဝါရီ 20, 2020 In: State Counsellor, State Counsellor Gallery, State Counsellor News
မွနျမာ – တရုတျ နှဈနိုငျငံ တှဆေုံ့ဆှေးနှေးပှဲကို ယနနေံ့နကျပိုငျးတှငျ နိုငျငံတျောသမ်မတအိမျတျော သံတမနျဆောငျ၌ကငျြးပရာ နိုငျငံတျော၏အတိုငျပငျခံ ပုဂ်ဂိုလျ ဒျေါအောငျဆနျးစုကွညျနှငျ့ တရုတျပွညျသူ့သမ်မတနိုငျငံ သမ်မတ မစ်စတာ ရှီကငျြ့ဖငျြတို့ တကျရောကျဆှေးနှေးကွသညျ။
နှဈနိုငျငံ တှဆေုံ့ဆှေးနှေးပှဲတှငျ မွနျမာနိုငျငံ ငွိမျးခမျြးရေးနှငျ့ ဖှံ့ဖွိုးတိုးတကျ ရေး၊ တဈနိုငျငံလုံး ပဈခတျတိုကျခိုကျမှုရပျစဲရေး သဘောတူစာခြုပျ (NCA) လကျမှတျ ရေးထိုးခွငျး မရှိသေးသညျ့ တိုငျးရငျးသားလကျနကျကိုငျအဖှဲ့အစညျးမြား NCA လကျမှတျရေးထိုးပွီး ငွိမျးခမျြးရေးဖွဈစဉျမြားတှငျ ပါဝငျလာရေး၊ တရုတျ-မွနျမာ စီးပှားရေးစင်ျကွံ ထူထောငျရေး၊ ကြောကျဖွူအထူးစီးပှားရေးဇုနျနှငျ့ ရနေကျဆိပျကမျး၊ တရုတျ-မွနျမာ စီးပှားရေးဇုနျနှငျ့ ရနျကုနျမွို့သဈစီမံကိနျး အောငျမွငျစှာ အကောငျ အထညျဖျောရေး၊ မွနျမာနိုငျငံ၏ စကျမှုကဏ်ဍ၊ လြှပျစဈကဏ်ဍ၊ လမျးပနျးဆကျသှယျ ရေးကဏ်ဍ၊ လယျယာစိုကျပြိုးရေးကဏ်ဍ၊ ရငျးနှီးမွှုပျနှံမှုနှငျ့ ကုနျသှယျမှုကဏ်ဍ ဖှံ့ဖွိုး တိုးတကျရေး၊ မွနျမာ့ထှကျကုနျပစ်စညျးမြားတငျပို့နိုငျရေး၊ နှဈနိုငျငံ ပွညျသူအခငျြးခငျြး ခဈြကွညျရငျးနှီးမှု မွှငျ့တငျရေး၊ နှဈနိုငျငံ ဆှမြေိုးပေါကျဖျောခဈြကွညျရေးနှငျ့ အေးအတူ ပူအမြှ အသိုကျအဝနျး ထူထောငျရေးဆိုငျရာ ကိစ်စရပျမြားကို ရငျးနှီး ပှငျ့လငျးစှာ အမွငျခငျြးဖလှယျ ဆှေးနှေးကွသညျ။
နှဈနိုငျငံ တှဆေုံ့ဆှေးနှေးပှဲသို့ နိုငျငံတျော၏ အတိုငျပငျခံပုဂ်ဂိုလျနှငျ့အတူ ပွညျထောငျစုဝနျကွီးမြားဖွဈကွသညျ့ ဒုတိယဗိုလျခြုပျကွီးကြျောဆှေ၊ ဦးကြျောတငျ့ ဆှေ၊ ဒေါကျတာဖမွေငျ့၊ ဦးမငျးသူ၊ ဒေါကျတာအောငျသူ၊ ဦးသနျ့စငျမောငျ၊ ဦးဝငျးခိုငျ၊ ဒေါကျတာသနျးမွငျ့၊ ဦးသောငျးထှနျး၊ ဦးဟနျဇျော၊ ဦးကြျောတငျ၊ တရုတျပွညျသူ့ သမ်မတနိုငျငံဆိုငျရာ မွနျမာနိုငျငံသံအမတျကွီး ဦးမြိုးသနျ့ဖနှေငျ့ တာဝနျရှိသူမြား တကျရောကျကွပွီး ဧညျ့သညျတျော တရုတျပွညျသူ့သမ်မတနိုငျငံ သမ်မတ မစ်စတာ ရှီကငျြ့ဖငျြနှငျ့အတူ တရုတျပွညျသူ့သမ်မတနိုငျငံ နိုငျငံတျောကောငျစီဝငျနှငျ့ နိုငျငံခွားရေး ဝနျကွီး မစ်စတာ ဝမျယိနှငျ့ အဆငျ့မွငျ့အရာရှိကွီးမြား၊ မွနျမာနိုငျငံဆိုငျရာ တရုတျ ပွညျသူ့သမ်မတနိုငျငံ သံအမတျကွီး မစ်စတာ ခနျြးဟိုငျတို့ တကျရောကျကွသညျ။
ဆှေးနှေးပှဲအပွီးတှငျ နိုငျငံတျော၏ အတိုငျပငျခံပုဂ်ဂိုလျနှငျ့ တရုတျပွညျသူ့ သမ်မတနိုငျငံ သမ်မတတို့သညျ ပွညျထောငျစုသမ်မတမွနျမာနိုငျငံတျောနှငျ့ တရုတျ ပွညျသူ့သမ်မတနိုငျငံတို့အကွား နှဈနိုငျငံ သဘောတူညီခကျြ၊ နားလညျမှုစာခြှနျလှာ နှငျ့ စာလှာမြား လဲလှယျသညျ့ အခမျးအနားသို့ တကျရောကျကွသညျ။
အခမျးအနားတှငျ နိုငျငံတျော၏အတိုငျပငျခံပုဂ်ဂိုလျ ဒျေါအောငျဆနျးစုကွညျနှငျ့ တရုတျပွညျသူသမ်မတနိုငျငံ သမ်မတ မစ်စတာ ရှီကငျြ့ဖငျြတို့ရှမှေ့ောကျ၌ “ကုနျထုတျ စှမျးအားနှငျ့ ရငျးနှီးမွှုပျနှံမှုပူးပေါငျးဆောငျရှကျမှု မွှငျ့တငျရေးဆိုငျရာ နားလညျမှု စာခြှနျလှာ” ကို စီးပှားရေးနှငျ့ ကူးသနျးရောငျးဝယျရေးဝနျကွီးဌာန ပွညျထောငျစု ဝနျကွီး ဒေါကျတာသနျးမွငျ့နှငျ့ တရုတျနိုငျငံ အမြိုးသားဖှံ့ဖွိုးတိုးတကျရေးနှငျ့ ပွုပွငျ ပွောငျးလဲရေးကျောမရှငျဥက်ကဋ်ဌ မစ်စတာ ဟယျလိဖုနျးတို့က လညျးကောငျး၊ “ရှလေီ-မူဆယျ နယျစပျစီးပှားရေးပူးပေါငျး ဆောငျရှကျမှုဇုနျမူဘောငျ သဘောတူစာခြုပျ လုပျငနျးစဉျမြား လငျြမွနျတိုးတကျစရေေး နားလညျမှုစာခြှနျလှာ” ၊ “ကုနျသှယျမှု မွှငျ့တငျရေး လုပျငနျးအဖှဲ့တညျထောငျခွငျးဆိုငျရာ နားလညျမှုစာခြှနျလှာ” နှငျ့ “အမှတျ(၂)စကျမှုသငျတနျးကြောငျး (မန်တလေး)အဆငျ့မွှငျ့ တငျရေးစီမံကိနျး အကောငျအထညျဖျောမှုဆိုငျရာ သဘောတူညီခကျြ” တို့ကို ပွညျထောငျစုဝနျကွီး ဒေါကျတာသနျးမွငျ့နှငျ့ တရုတျနိုငျငံ စီးပှားရေးနှငျ့ကူးသနျးရောငျးဝယျရေးဝနျကွီး မစ်စတာ ကြုံးရှနျး တို့ကလညျးကောငျး၊ “ရနျကုနျရဲကှပျကဲမှုဗဟိုဌာနလှဲပွောငျးခွငျး အထောကျအထားစာလှာ”ကို ပွညျထဲရေးဝနျကွီးဌာန ပွညျထောငျစုဝနျကွီး ဒုတိယဗိုလျခြုပျကွီးကြျောဆှနှေငျ့ တရုတျနိုငျငံ စီးပှားရေးနှငျ့ကူးသနျးရောငျးဝယျရေး ဝနျကွီး မစ်စတာ ကြုံးရှနျး တို့ကလညျးကောငျး၊ “မွနျမာနိုငျငံရဲတပျဖှဲ့သို့ ကငျးလှညျ့ ရယောဉျ (၆)စီး ပေးအပျမညျ့စာလှာ”ကို ပွညျထောငျစုဝနျကွီး ဒုတိယဗိုလျခြုပျကွီး ကြျောဆှနှေငျ့ တရုတျနိုငျငံ အပွညျပွညျဆိုငျရာဖှံ့ဖွိုးတိုးတကျမှု ပူးပေါငျးဆောငျရှကျ ရေးအဂေငျြစီ ဥက်ကဋ်ဌ မစ်စတာ ဝမျးရှောငျထောငျးတို့ကလညျးကောငျး၊ “(၃)နှဈတာ နယျစပျဒသေမြား ဖှံ့ဖွိုးမှုစီမံကိနျး ဖွဈနိုငျခွလေလေ့ာမှုဆိုငျရာ စာလှာ” ကို နယျစပျရေးရာဝနျကွီးဌာန ပွညျထောငျစုဝနျကွီး ဒုတိယဗိုလျခြုပျကွီးရဲအောငျနှငျ့ တရုတျနိုငျငံ အပွညျပွညျဆိုငျရာဖှံ့ဖွိုးတိုးတကျမှု ပူးပေါငျးဆောငျရှကျရေး အဂေငျြစီ ဥက်ကဋ်ဌ မစ်စတာ ဝမျးရှောငျထောငျး တို့ကလညျးကောငျး အပွနျအလှနျ လဲလှယျကွ သညျ။
ဆကျလကျ၍ “တရုတျအမြိုးသားရုပျမွငျသံကွား၊ အသံလှငျ့ဌာနနှငျ့ ပွနျကွားရေးဝနျကွီးဌာနတို့အကွား ပူးပေါငျးဆောငျရှကျရေးဆိုငျရာ သဘောတူ ညီခကျြ” နှငျ့ “၂၀၂၀ လနျခနျြး-မဲခေါငျရုပျမွငျသံကွား သီတငျးပတျ၏ “မွနျမာနေ့” ပူးတှဲကငျြးပရေးဆိုငျရာ နားလညျမှုစာခြှနျလှာ”တို့ကို ပွနျကွားရေးဝနျကွီးဌာန ပွညျထောငျစုဝနျကွီး ဒေါကျတာဖမွေငျ့နှငျ့ တရုတျနိုငျငံ အမြိုးသားရဒေီယိုနှငျ့ ရုပျမွငျ သံကွားစီမံခနျ့ခှဲရေးဝနျကွီး မစ်စတာ ညှဲခနျြးရှီး တို့ကလညျးကောငျး၊ “မွနျမာနိုငျငံမှ ဆနျကို တရုတျနိုငျငံသို့တငျပို့ရနျ စဈဆေးခွငျးနှငျ့ ပိုးမှားကငျးစငျရေး သဘောတူ စာခြုပျ” ၊ “မွနျမာနိုငျငံမှ အပူပေးစနဈဖွငျ့ ပွုပွငျထုတျလုပျထားသော ပိုးအိမျခွောကျ မြား တငျပို့ခွငျးဆိုငျရာ သဘောတူစာခြုပျ”နှငျ့ “မွနျမာနိုငျငံမှ တရုတျနိုငျငံသို့ တငျပို့မညျ့ ကြှဲ၊နှားမြားအတှကျ ထိနျးသိမျးစောငျ့ကွညျ့ရေးနှငျ့ ကနျြးမာရေး လိုအပျ ခကျြဆိုငျရာသဘောတူစာခြုပျ” တို့ကို စိုကျပြိုးရေး၊ မှေးမွူရေးနှငျ့ ဆညျမွောငျး ဝနျကွီးဌာန ပွညျထောငျစုဝနျကွီး ဒေါကျတာအောငျသူနှငျ့ မွနျမာနိုငျငံဆိုငျရာ တရုတျသံအမတျကွီး မစ်စတာ ခနျြးဟိုငျ တို့ကလညျးကောငျး၊ “စိုကျပြိုးရေးထှကျကုနျ မြား၏ အရညျအသှေးထိနျးခြုပျမှုဗဟိုဌာန စီမံကိနျးဆိုငျရာစာလှာ” နှငျ့ “စပျမြိုးစပါး သုတသေနဗဟိုဌာန စီမံကိနျးဆိုငျရာစာလှာ”တို့ကို ပွညျထောငျစုဝနျကွီး ဒေါကျတာ အောငျသူနှငျ့ တရုတျနိုငျငံ အပွညျပွညျဆိုငျရာဖှံ့ဖွိုးတိုးတကျမှု ပူးပေါငျးဆောငျရှကျ ရေးအဂေငျြစီဥက်ကဋ်ဌ မစ်စတာ ဝမျးရှောငျထောငျးတို့ကလညျးကောငျး အပွနျအလှနျ လဲလှယျကွ သညျ။
ထို့နောကျ “အတိုးမဲ့ခြေးငှဖွေငျ့ လူစီးရထားတှဲမြားဝယျယူရေးသဘောတူ စာခြုပျ”ကို ပို့ဆောငျရေးနှငျ့ဆကျသှယျရေးဝနျကွီးဌာန ပွညျထောငျစုဝနျကွီး ဦးသနျ့စငျမောငျနှငျ့ တရုတျနိုငျငံ စီးပှားရေးနှငျ့ကူးသနျးရောငျးဝယျရေးဝနျကွီး မစ်စတာ ကြုံးရှနျး တို့ကလညျးကောငျး၊ “အခွခေံအဆောကျအဦ ဖှံ့ဖွိုးတိုးတကျရေး ပူးပေါငျးဆောငျရှကျမှု မွှငျ့တငျခွငျးဆိုငျရာ နားလညျမှုစာခြှနျလှာ”ကို ရငျးနှီးမွှုပျနှံမှုနှငျ့ နိုငျငံခွားစီးပှားဆကျသှယျရေးဝနျကွီးဌာန ပွညျထောငျစုဝနျကွီး ဦးသောငျးထှနျးနှငျ့ တရုတျနိုငျငံ စီးပှားရေးနှငျ့ကူးသနျးရောငျးဝယျရေးဝနျကွီး မစ်စတာ ကြုံးရှနျးတို့က လညျးကောငျး၊ “လူ့စှမျးအားအရငျးအမွဈဖှံ့ဖွိုးတိုးတကျမှု ပူးပေါငျးဆောငျရှကျရေး နားလညျမှုစာခြှနျလှာ” ကို ပွညျထောငျစုဝနျကွီး ဦးသောငျးထှနျးနှငျ့ တရုတျနိုငျငံ အပွညျပွညျဆိုငျရာ ဖှံ့ဖွိုးတိုးတကျမှုပူးပေါငျးဆောငျရှကျရေးအဂေငျြစီဥက်ကဋ်ဌ မစ်စတာ ဝမျးရှောငျထောငျး တို့ကလညျးကောငျး၊ “ကှမျးလုံတံတားစီမံကိနျး အကောငျအထညျ ဖျောမှုဆိုငျရာ သဘောတူညီခကျြ” ကို ဆောကျလုပျရေးဝနျကွီးဌာန ပွညျထောငျစု ဝနျကွီး ဦးဟနျဇျောနှငျ့ တရုတျနိုငျငံ စီးပှားရေးနှငျ့ကူးသနျးရောငျးဝယျရေးဝနျကွီး မစ်စတာ ကြုံးရှနျး တို့ကလညျးကောငျး၊ “ကခငျြပွညျနယျအတှငျးရှိ နရေပျစှနျ့ခှာသူမြား အား ပွနျလညျနရောခထြားမှု အကောငျအထညျဖျောရေးဆျိုငျရာ စီမံကိနျးစာလှာ”ကို လူမှုဝနျထမျး၊ကယျဆယျရေးနှငျ့ ပွနျလညျနရောခထြားရေးဝနျကွီးဌာန ပွညျထောငျစု ဝနျကွီး ဒေါကျတာဝငျးမွတျအေးနှငျ့ တရုတျနိုငျငံ အပွညျပွညျဆိုငျရာဖှံ့ဖွိုးတိုးတကျ မှု ပူးပေါငျးဆောငျရှကျရေး အဂေငျြစီဥက်ကဋ်ဌ မစ်စတာ ဝမျးရှောငျထောငျးတို့က လညျး ကောငျး အပွနျအလှနျ လဲလှယျကွသညျ။
ယငျးနောကျ “ကြောကျဖွူအထူးစီးပှားရေးဇုနျ ရနေကျဆိပျကမျးစီမံကိနျး ဆိုငျရာ သဘောတူစာခြုပျ”နှငျ့ “အစုရှယျယာမြားနှငျ့သကျဆိုငျသော သဘောတူ စာခြုပျ” တို့ကို စီးပှားရေးနှငျ့ကူးသနျးရောငျးဝယျရေးဝနျကွီးဌာန ဒုတိယဝနျကွီး ဦးအောငျထူးနှငျ့ တရုတျနိုငျငံ CITIC Consortium Port Investment Limited ဥက်ကဋ်ဌ မစ်စတာ ခနျြကနျြ့မငျ တို့ကလညျးကောငျး၊ “မန်တလေးတိုငျးဒသေကွီးနှငျ့ ယူနနျ ပွညျနယျတို့အကွား မွနျမာ့စီးပှားရေးစင်ျကွံ ပူးတှဲတညျထောငျရေး မူဘောငျအောကျမှ ဒသေန်တရအဆငျ့ ပူးပေါငျးဆောငျရှကျမှုနားလညျမှုစာခြှနျလှာ”ကို မန်တလေးတိုငျး ဒသေကွီး စီမံကိနျးနှငျ့ဘဏ်ဍာရေးဝနျကွီး ဦးမွတျသူနှငျ့ တရုတျကှနျမွူနဈပါတီ ယူနနျ ပွညျနယျကျောမတီအတှငျးရေးမှူး မစ်စတာ ကနျြးကျောဟှာ တို့ကလညျးကောငျး၊ “ရနျကုနျတိုငျးဒသေကွီးနှငျ့ ယူနနျပွညျနယျတို့အကွား ခဈြကွညျရေးဆကျဆံမှု တညျထောငျရေးဆိုငျရာ နားလညျမှုစာခြှနျလှာ”ကို ရနျကုနျတိုငျးဒသေကွီး စညျပငျ သာယာရေးဝနျကွီး ဦးမောငျမောငျစိုးနှငျ့ တရုတျကှနျမွူနဈပါတီ ယူနနျပွညျနယျ ကျောမတီအတှငျးရေးမှူး မစ်စတာ ကနျြးကျောဟှာ တို့ကလညျးကောငျး၊ “ရနျကုနျ မွို့တျော မွို့ပွဖှံ့ဖွိုးတိုးတကျရေး စီမံကိနျးသဈစာလှာ”ကို ရနျကုနျတိုငျးဒသေကွီး စညျပငျသာယာရေးဝနျကွီး ဦးမောငျမောငျစိုးနှငျ့ China Communications Construction Company Ltd., ဥက်ကဋ်ဌ မစ်စတာ စုနျ့ဟိုငျလနျြ တို့ကလညျးကောငျး၊ “နှဈနိုငျငံသံရုံးမွနှေငျ့ အဆောကျအအုံ အပွနျအလှနျထောကျပံ့ခွငျးဆိုငျရာ သဘော တူညီခကျြ” နှငျ့ “နိုငျငံခွားရေး ဝနျကွီးဌာနမြားအကွား ပူးပေါငျးဆောငျရှကျမှု မွှငျ့တငျ ရေးဆိုငျရာ နားလညျမှုစာခြှနျလှာ”တို့ကို နိုငျငံခွားရေးဝနျကွီးဌာန အမွဲတမျး အတှငျးဝနျ ဦးစိုးဟနျနှငျ့ မွနျမာနိုငျငံဆိုငျရာ တရုတျသံအမတျကွီး မစ်စတာခနျြးဟိုငျ တို့ကလညျးကောငျး၊ “တရုတျ-မွနျမာ နယျစပျဖွတျကြျောဓာတျအားလိုငျးစီမံကိနျး ဖွဈမွောကျနိုငျစှမျး လလေ့ာမှု ဆောငျရှကျရေးဆိုငျရာ နားလညျမှုစာခြှနျလှာ”ကို လြှပျစဈနှငျ့ စှမျးအငျဝနျကွီးဌာန အမွဲတမျးအတှငျးဝနျ ဦးတငျမောငျဦးနှငျ့ တရုတျ နိုငျငံ China South Power Grid ဘုတျအဖှဲ့ဥက်ကဋ်ဌ မစ်စတာ မုံ့ကနျြ့ဖငျြ တို့က လညျးကောငျး၊ “နှဈနိုငျငံ ဘောလုံးအဖှဲ့ခြုပျမြား ပူးပေါငျးဆောငျရှကျမှုဆိုငျရာ နညျးလညျမှုစာခြှနျလှာ”ကို ကနျြးမာရေးနှငျ့ အားကစားဝနျကွီးဌာန အမွဲတမျး အတှငျးဝနျ ပါမောက်ခ ဒေါကျတာ သကျခိုငျဝငျးနှငျ့ မွနျမာနိုငျငံဆိုငျရာ တရုတျ သံအမတျကွီး မစ်စတာ ခနျြးဟိုငျတို့က လညျးကောငျး၊ “မန်တလေး-ထီးခြိုငျ့-မူဆယျ အမွနျလမျးမကွီးနှငျ့ ကြောကျဖွူ-နပွေညျ တျော အဝေးပွေးလမျးမကွီး စီမံကိနျး ဖွဈနိုငျခွလေလေ့ာမှုအစီရငျခံစာ” ကို ဆောကျလုပျရေးဝနျကွီးဌာန အမွဲတမျး အတှငျးဝနျ ဦးဝငျးတငျ့နှငျ့ တရုတျနိုငျငံ China Harbour Engineering Co.Ltd. ဥက်ကဋ်ဌ မစ်စတာ ထနျခြောငျနျလနျြ တို့က လညျးကောငျး၊ “မူဆယျ-မန်တလေးရထားလမျး ဖွဈနိုငျခွလေလေ့ာမှုအစီရငျခံစာ” ကို ပို့ဆောငျရေးနှငျ့ ဆကျသှယျရေးဝနျကွီးဌာန မွနျမာ့မီးရထား ဦးဆောငျညှနျကွားရေးမှူး ဦးဘမွငျ့နှငျ့ တရုတျနိုငျငံ China Railway Engineering Company ဥက်ကဋ်ဌ မစ်စတာ ကနျြးကြုံးရနျ တို့ကလညျးကောငျး အပွနျအလှနျ လဲလှယျကွသညျ။
မှနျးလှဲပိုငျးတှငျ နိုငျငံတျော၏အတိုငျပငျခံပုဂ်ဂိုလျ ဒျေါအောငျဆနျးစုကွညျ သညျ တရုတျပွညျသူ့သမ်မတနိုငျငံ သမ်မတ မစ်စတာရှီကငျြ့ဖငျြ ဦးဆောငျသညျ့ ကိုယျစားလှယျအဖှဲ့ကို နပွေညျတျောရှိ ရှစေံအိမျဟိုတယျ၌ ဂုဏျပွုနလေ့ယျစာဖွငျ့ တညျခငျးဧညျ့ခံသညျ။
ဂုဏျပွုနလေ့ယျစာစားပှဲအပွီးတှငျ နိုငျငံတျော၏ အတိုငျပငျခံပုဂ်ဂိုလျ ဒျေါအောငျဆနျးစုကွညျ က တရုတျပွညျသူ့သမ်မတနိုငျငံ သမ်မတ မစ်စတာရှီကငျြ့ဖငျြ ထံ ခရီးစဉျမှတျတမျး ဓာတျပုံအယျလျဘမျကို ပေးအပျသညျ။
မြန်မာ – တရုတ် နှစ်နိုင်ငံ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲကျင်းပ နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ သမ္မတ မစ္စတာ ရှီကျင့်ဖျင်တို့ တက်ရောက်ဆွေးနွေး
မြန်မာ – တရုတ် နှစ်နိုင်ငံ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲကို ယနေ့နံနက်ပိုင်းတွင် နိုင်ငံတော်သမ္မတအိမ်တော် သံတမန်ဆောင်၌ကျင်းပရာ နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံ ပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ သမ္မတ မစ္စတာ ရှီကျင့်ဖျင်တို့ တက်ရောက်ဆွေးနွေးကြသည်။
နှစ်နိုင်ငံ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲတွင် မြန်မာနိုင်ငံ ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက် ရေး၊ တစ်နိုင်ငံလုံး ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုရပ်စဲရေး သဘောတူစာချုပ်(NCA) လက်မှတ် ရေးထိုးခြင်း မရှိသေးသည့် တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းများ NCA လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး ငြိမ်းချမ်းရေးဖြစ်စဉ်များတွင် ပါဝင်လာရေး၊ တရုတ်-မြန်မာ စီးပွားရေးစင်္ကြံ ထူထောင်ရေး၊ ကျောက်ဖြူအထူးစီးပွားရေးဇုန်နှင့် ရေနက်ဆိပ်ကမ်း၊ တရုတ်-မြန်မာ စီးပွားရေးဇုန်နှင့် ရန်ကုန်မြို့သစ်စီမံကိန်း အောင်မြင်စွာ အကောင် အထည်ဖော်ရေး၊ မြန်မာနိုင်ငံ၏ စက်မှုကဏ္ဍ၊ လျှပ်စစ်ကဏ္ဍ၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ် ရေးကဏ္ဍ၊ လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးကဏ္ဍ၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် ကုန်သွယ်မှုကဏ္ဍ ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရေး၊ မြန်မာ့ထွက်ကုန်ပစ္စည်းများတင်ပို့နိုင်ရေး၊ နှစ်နိုင်ငံ ပြည်သူအချင်းချင်း ချစ်ကြည်ရင်းနှီးမှု မြှင့်တင်ရေး၊ နှစ်နိုင်ငံ ဆွေမျိုးပေါက်ဖော်ချစ်ကြည်ရေးနှင့် အေးအတူ ပူအမျှ အသိုက်အ၀န်း ထူထောင်ရေးဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များကို ရင်းနှီး ပွင့်လင်းစွာ အမြင်ချင်းဖလှယ် ဆွေးနွေးကြသည်။
နှစ်နိုင်ငံ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲသို့ နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်နှင့်အတူ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးများဖြစ်ကြသည့် ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးကျော်ဆွေ၊ ဦးကျော်တင့် ဆွေ၊ ဒေါက်တာဖေမြင့်၊ ဦးမင်းသူ၊ ဒေါက်တာအောင်သူ၊ ဦးသန့်စင်မောင်၊ ဦးဝင်းခိုင်၊ ဒေါက်တာသန်းမြင့်၊ ဦးသောင်းထွန်း၊ ဦးဟန်ဇော်၊ ဦးကျော်တင်၊ တရုတ်ပြည်သူ့ သမ္မတနိုင်ငံဆိုင်ရာ မြန်မာနိုင်ငံသံအမတ်ကြီး ဦးမျိုးသန့်ဖေနှင့် တာဝန်ရှိသူများ တက်ရောက်ကြပြီး ဧည့်သည်တော် တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ သမ္မတ မစ္စတာ ရှီကျင့်ဖျင်နှင့်အတူ တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ နိုင်ငံတော်ကောင်စီဝင်နှင့် နိုင်ငံခြားရေး ၀န်ကြီး မစ္စတာ ၀မ်ယိနှင့် အဆင့်မြင့်အရာရှိကြီးများ၊ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ တရုတ် ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ သံအမတ်ကြီး မစ္စတာ ချန်းဟိုင်တို့ တက်ရောက်ကြသည်။
ဆွေးနွေးပွဲအပြီးတွင် နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်နှင့် တရုတ်ပြည်သူ့ သမ္မတနိုင်ငံ သမ္မတတို့သည် ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်နှင့် တရုတ် ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံတို့အကြား နှစ်နိုင်ငံ သဘောတူညီချက်၊ နားလည်မှုစာချွန်လွှာ နှင့် စာလွှာများ လဲလှယ်သည့် အခမ်းအနားသို့ တက်ရောက်ကြသည်။
အခမ်းအနားတွင် နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် တရုတ်ပြည်သူသမ္မတနိုင်ငံ သမ္မတ မစ္စတာ ရှီကျင့်ဖျင်တို့ရှေ့မှောက်၌ “ကုန်ထုတ် စွမ်းအားနှင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု မြှင့်တင်ရေးဆိုင်ရာ နားလည်မှု စာချွန်လွှာ” ကို စီးပွားရေးနှင့် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စု ၀န်ကြီး ဒေါက်တာသန်းမြင့်နှင့် တရုတ်နိုင်ငံ အမျိုးသားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနှင့် ပြုပြင် ပြောင်းလဲရေးကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌ မစ္စတာ ဟယ်လိဖုန်းတို့က လည်းကောင်း၊ “ရွှေလီ-မူဆယ် နယ်စပ်စီးပွားရေးပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်မှုဇုန်မူဘောင် သဘောတူစာချုပ် လုပ်ငန်းစဉ်များ လျင်မြန်တိုးတက်စေရေး နားလည်မှုစာချွန်လွှာ” ၊ “ကုန်သွယ်မှု မြှင့်တင်ရေး လုပ်ငန်းအဖွဲ့တည်ထောင်ခြင်းဆိုင်ရာ နားလည်မှုစာချွန်လွှာ” နှင့် “အမှတ်(၂)စက်မှုသင်တန်းကျောင်း (မန္တလေး)အဆင့်မြှင့် တင်ရေးစီမံကိန်း အကောင်အထည်ဖော်မှုဆိုင်ရာ သဘောတူညီချက်” တို့ကို ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာသန်းမြင့်နှင့် တရုတ်နိုင်ငံ စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီး မစ္စတာ ကျုံးရှန်း တို့ကလည်းကောင်း၊ “ရန်ကုန်ရဲကွပ်ကဲမှုဗဟိုဌာနလွှဲပြောင်းခြင်း အထောက်အထားစာလွှာ”ကို ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးကျော်ဆွေနှင့် တရုတ်နိုင်ငံ စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေး ၀န်ကြီး မစ္စတာ ကျုံးရှန်း တို့ကလည်းကောင်း၊ “မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့သို့ ကင်းလှည့် ရေယာဉ် (၆)စီး ပေးအပ်မည့်စာလွှာ”ကို ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီး ကျော်ဆွေနှင့် တရုတ်နိုင်ငံ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု ပူးပေါင်းဆောင်ရွက် ရေးအေဂျင်စီ ဥက္ကဋ္ဌ မစ္စတာ ၀မ်းရှောင်ထောင်းတို့ကလည်းကောင်း၊ “(၃)နှစ်တာ နယ်စပ်ဒေသများ ဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံကိန်း ဖြစ်နိုင်ခြေလေ့လာမှုဆိုင်ရာ စာလွှာ” ကို နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးရဲအောင်နှင့် တရုတ်နိုင်ငံ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး အေဂျင်စီ ဥက္ကဋ္ဌ မစ္စတာ ၀မ်းရှောင်ထောင်း တို့ကလည်းကောင်း အပြန်အလှန် လဲလှယ်ကြ သည်။
ဆက်လက်၍ “တရုတ်အမျိုးသားရုပ်မြင်သံကြား၊ အသံလွှင့်ဌာနနှင့် ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာနတို့အကြား ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဆိုင်ရာ သဘောတူ ညီချက်” နှင့် “၂၀၂၀ လန်ချန်း-မဲခေါင်ရုပ်မြင်သံကြား သီတင်းပတ်၏ “မြန်မာနေ့” ပူးတွဲကျင်းပရေးဆိုင်ရာ နားလည်မှုစာချွန်လွှာ”တို့ကို ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာဖေမြင့်နှင့် တရုတ်နိုင်ငံ အမျိုးသားရေဒီယိုနှင့် ရုပ်မြင် သံကြားစီမံခန့်ခွဲရေးဝန်ကြီး မစ္စတာ ညှဲချန်းရှီး တို့ကလည်းကောင်း၊ “မြန်မာနိုင်ငံမှ ဆန်ကို တရုတ်နိုင်ငံသို့တင်ပို့ရန် စစ်ဆေးခြင်းနှင့် ပိုးမွှားကင်းစင်ရေး သဘောတူ စာချုပ်” ၊ “မြန်မာနိုင်ငံမှ အပူပေးစနစ်ဖြင့် ပြုပြင်ထုတ်လုပ်ထားသော ပိုးအိမ်ခြောက် များ တင်ပို့ခြင်းဆိုင်ရာ သဘောတူစာချုပ်”နှင့် “မြန်မာနိုင်ငံမှ တရုတ်နိုင်ငံသို့ တင်ပို့မည့် ကျွဲ၊နွားများအတွက် ထိန်းသိမ်းစောင့်ကြည့်ရေးနှင့် ကျန်းမာရေး လိုအပ် ချက်ဆိုင်ရာသဘောတူစာချုပ်” တို့ကို စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်း ၀န်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာအောင်သူနှင့် မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ တရုတ်သံအမတ်ကြီး မစ္စတာ ချန်းဟိုင် တို့ကလည်းကောင်း၊ “စိုက်ပျိုးရေးထွက်ကုန် များ၏ အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှုဗဟိုဌာန စီမံကိန်းဆိုင်ရာစာလွှာ” နှင့် “စပ်မျိုးစပါး သုတေသနဗဟိုဌာန စီမံကိန်းဆိုင်ရာစာလွှာ”တို့ကို ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာ အောင်သူနှင့် တရုတ်နိုင်ငံ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု ပူးပေါင်းဆောင်ရွက် ရေးအေဂျင်စီဥက္ကဋ္ဌ မစ္စတာ ၀မ်းရှောင်ထောင်းတို့ကလည်းကောင်း အပြန်အလှန် လဲလှယ်ကြ သည်။
ထို့နောက် “အတိုးမဲ့ချေးငွေဖြင့် လူစီးရထားတွဲများဝယ်ယူရေးသဘောတူ စာချုပ်”ကို ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးသန့်စင်မောင်နှင့် တရုတ်နိုင်ငံ စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီး မစ္စတာ ကျုံးရှန်း တို့ကလည်းကောင်း၊ “အခြေခံအဆောက်အဦ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု မြှင့်တင်ခြင်းဆိုင်ရာ နားလည်မှုစာချွန်လွှာ”ကို ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် နိုင်ငံခြားစီးပွားဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးသောင်းထွန်းနှင့် တရုတ်နိုင်ငံ စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီး မစ္စတာ ကျုံးရှန်းတို့က လည်းကောင်း၊ “လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး နားလည်မှုစာချွန်လွှာ” ကို ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးသောင်းထွန်းနှင့် တရုတ်နိုင်ငံ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးအေဂျင်စီဥက္ကဋ္ဌ မစ္စတာ ၀မ်းရှောင်ထောင်း တို့ကလည်းကောင်း၊ “ကွမ်းလုံတံတားစီမံကိန်း အကောင်အထည် ဖော်မှုဆိုင်ရာ သဘောတူညီချက်” ကို ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စု ၀န်ကြီး ဦးဟန်ဇော်နှင့် တရုတ်နိုင်ငံ စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီး မစ္စတာ ကျုံးရှန်း တို့ကလည်းကောင်း၊ “ကချင်ပြည်နယ်အတွင်းရှိ နေရပ်စွန့်ခွာသူများ အား ပြန်လည်နေရာချထားမှု အကောင်အထည်ဖော်ရေးဆိုင်ရာ စီမံကိန်းစာလွှာ”ကို လူမှုဝန်ထမ်း၊ကယ်ဆယ်ရေးနှင့် ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စု ၀န်ကြီး ဒေါက်တာဝင်းမြတ်အေးနှင့် တရုတ်နိုင်ငံ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက် မှု ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး အေဂျင်စီဥက္ကဋ္ဌ မစ္စတာ ၀မ်းရှောင်ထောင်းတို့က လည်း ကောင်း အပြန်အလှန် လဲလှယ်ကြသည်။
ယင်းနောက် “ကျောက်ဖြူအထူးစီးပွားရေးဇုန် ရေနက်ဆိပ်ကမ်းစီမံကိန်း ဆိုင်ရာ သဘောတူစာချုပ်”နှင့် “အစုရှယ်ယာများနှင့်သက်ဆိုင်သော သဘောတူ စာချုပ်” တို့ကို စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန ဒုတိယ၀န်ကြီး ဦးအောင်ထူးနှင့် တရုတ်နိုင်ငံ CITIC Consortium Port Investment Limited ဥက္ကဋ္ဌ မစ္စတာ ချန်ကျန့်မင် တို့ကလည်းကောင်း၊ “မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးနှင့် ယူနန် ပြည်နယ်တို့အကြား မြန်မာ့စီးပွားရေးစင်္ကြံ ပူးတွဲတည်ထောင်ရေး မူဘောင်အောက်မှ ဒေသန္တရအဆင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုနားလည်မှုစာချွန်လွှာ”ကို မန္တလေးတိုင်း ဒေသကြီး စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီး ဦးမြတ်သူနှင့် တရုတ်ကွန်မြူနစ်ပါတီ ယူနန် ပြည်နယ်ကော်မတီအတွင်းရေးမှူး မစ္စတာ ကျန်းကော်ဟွာ တို့ကလည်းကောင်း၊ “ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးနှင့် ယူနန်ပြည်နယ်တို့အကြား ချစ်ကြည်ရေးဆက်ဆံမှု တည်ထောင်ရေးဆိုင်ရာ နားလည်မှုစာချွန်လွှာ”ကို ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး စည်ပင် သာယာရေးဝန်ကြီး ဦးမောင်မောင်စိုးနှင့် တရုတ်ကွန်မြူနစ်ပါတီ ယူနန်ပြည်နယ် ကော်မတီအတွင်းရေးမှူး မစ္စတာ ကျန်းကော်ဟွာ တို့ကလည်းကောင်း၊ “ရန်ကုန် မြို့တော် မြို့ပြဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး စီမံကိန်းသစ်စာလွှာ”ကို ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး စည်ပင်သာယာရေးဝန်ကြီး ဦးမောင်မောင်စိုးနှင့် China Communications Construction Company Ltd., ဥက္ကဋ္ဌ မစ္စတာ စုန့်ဟိုင်လျန် တို့ကလည်းကောင်း၊ “နှစ်နိုင်ငံသံရုံးမြေနှင့် အဆောက်အအုံ အပြန်အလှန်ထောက်ပံ့ခြင်းဆိုင်ရာ သဘော တူညီချက်” နှင့် “နိုင်ငံခြားရေး ၀န်ကြီးဌာနများအကြား ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု မြှင့်တင် ရေးဆိုင်ရာ နားလည်မှုစာချွန်လွှာ”တို့ကို နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန အမြဲတမ်း အတွင်းဝန် ဦးစိုးဟန်နှင့် မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ တရုတ်သံအမတ်ကြီး မစ္စတာချန်းဟိုင် တို့ကလည်းကောင်း၊ “တရုတ်-မြန်မာ နယ်စပ်ဖြတ်ကျော်ဓာတ်အားလိုင်းစီမံကိန်း ဖြစ်မြောက်နိုင်စွမ်း လေ့လာမှု ဆောင်ရွက်ရေးဆိုင်ရာ နားလည်မှုစာချွန်လွှာ”ကို လျှပ်စစ်နှင့် စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန အမြဲတမ်းအတွင်းဝန် ဦးတင်မောင်ဦးနှင့် တရုတ် နိုင်ငံ China South Power Grid ဘုတ်အဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌ မစ္စတာ မုံ့ကျန့်ဖျင် တို့က လည်းကောင်း၊ “နှစ်နိုင်ငံ ဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ်များ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုဆိုင်ရာ နည်းလည်မှုစာချွန်လွှာ”ကို ကျန်းမာရေးနှင့် အားကစားဝန်ကြီးဌာန အမြဲတမ်း အတွင်းဝန် ပါမောက္ခ ဒေါက်တာ သက်ခိုင်ဝင်းနှင့် မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ တရုတ် သံအမတ်ကြီး မစ္စတာ ချန်းဟိုင်တို့က လည်းကောင်း၊ “မန္တလေး-ထီးချိုင့်-မူဆယ် အမြန်လမ်းမကြီးနှင့် ကျောက်ဖြူ-နေပြည် တော် အဝေးပြေးလမ်းမကြီး စီမံကိန်း ဖြစ်နိုင်ခြေလေ့လာမှုအစီရင်ခံစာ” ကို ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာန အမြဲတမ်း အတွင်းဝန် ဦးဝင်းတင့်နှင့် တရုတ်နိုင်ငံ China Harbour Engineering Co.Ltd. ဥက္ကဋ္ဌ မစ္စတာ ထန်ချောင်န်လျန် တို့က လည်းကောင်း၊ “မူဆယ်-မန္တလေးရထားလမ်း ဖြစ်နိုင်ခြေလေ့လာမှုအစီရင်ခံစာ” ကို ပို့ဆောင်ရေးနှင့် ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန မြန်မာ့မီးရထား ဦးဆောင်ညွှန်ကြားရေးမှူး ဦးဘမြင့်နှင့် တရုတ်နိုင်ငံ China Railway Engineering Company ဥက္ကဋ္ဌ မစ္စတာ ကျန်းကျုံးရန် တို့ကလည်းကောင်း အပြန်အလှန် လဲလှယ်ကြသည်။
မွန်းလွဲပိုင်းတွင် နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် သည် တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ သမ္မတ မစ္စတာရှီကျင့်ဖျင် ဦးဆောင်သည့် ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ကို နေပြည်တော်ရှိ ရွှေစံအိမ်ဟိုတယ်၌ ဂုဏ်ပြုနေ့လယ်စာဖြင့် တည်ခင်းဧည့်ခံသည်။
ဂုဏ်ပြုနေ့လယ်စာစားပွဲအပြီးတွင် နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် က တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ သမ္မတ မစ္စတာရှီကျင့်ဖျင် ထံ ခရီးစဉ်မှတ်တမ်း ဓာတ်ပုံအယ်လ်ဘမ်ကို ပေးအပ်သည်။
အမြိုးသားဒီမိုကရစေီအဖှဲ့ခြုပျ ရနျကုနျတိုငျး အမြိုးသမီးလုပျငနျးကျောမတီမှ စီစဥျသော အမြိုးသမီးနှငျ့နိုငျငံရေး စကားဝိုငျးအား ဗဟနျးမွို့နယျရုံးတှငျ ပွုလုပျကငျြးပ